नयाँ इतिहास रच्दै सुनको मूल्य – Khabarhouse
नयाँ इतिहास रच्दै सुनको मूल्य
Khabar house | ९ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार ०५:०४ | Comments
काठमाडौं । बिहीबार नेपाली बजारमा सुन हालसम्मकै उच्च मूल्यमा कारोबार भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बिहीबार सुनको भाउ प्रतितोला ७७ हजार ६ सय रूपियाँ कायम भएको छ। अघिल्लो दिनको तुलनामा यसदिन सुन तोलामा ५ सय रुपियाँले बढेको हो । सुन बुधबार तोलाको ७७ हजार १ सय रुपियाँ र मंगलबार ७६ हजार ७ सय रुपियाँमा कारोबार भएको थियो ।
आइतबार र सोमबार भने प्रतितोला ७६ हजार ५ सय रुपियाँमा स्थिर रहेको थियो । तेजाबी सुन पनि बिहीबार प्रतितोला ७७ हजार ३ सय रूपियाँ पुगेको छ। त्यसैगरि अघिल्लो दिनको तुलनामा चाँदी प्रतितोला १० रुपियाँले बढेर ९ सय १५ पुगेको छ । बुधबार ९ सय ५ रुपियाँमा कारोबार भएको चाँदीको मूल्य आइतबार ८ सय ५५ रुपियाँ कायम भएको थियो भने गत सोमबार र मंगलबार ८ सय ९० रुपियाँमा स्थिर थियो ।
कोरोना भाइरसको प्रभावका कारण विश्व बजारमा सुनको मूल्य बढ्न गएको र त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि परेको सुन व्यवसायीहरूले जनाएका छन्। कोरोना सं’क्रमणका कारण सुन किन्नेतर्फ भन्दा स्वास्थ्य सुरक्षातर्फ जोड दिइएकाले कारोबार मन्दभएको उनीहरू को बुझाइ छ । सुनको मूल्य बढ्दै जाँदा कारोबार भने निकै घटेको छ । सुन व्यवसायी तेजरत्न शाक्य बजारमा दैनिक १०/१२ किलो सुनमात्रै बिक्री भइरहेको बताउनु हुन्छ ।
शुक्रबार ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य, यस्तो छ आजको मुल्य !
सुनको मूल्यमा वृद्धि, तोलामा कति पुग्यो ?
सुनको भाउ एकैदिन २३ सय रुपैयाँले घट्यो
सुनको मूल्यमा एक सातादेखि लगातार गिरावट
सरकारले घाेषणा गरेकाे १ खर्ब पुनर्कर्जाको आवेदन खुल्यो, के-के बुझाउनुपर्छ विवरण ?